ဘော့စ်က သူ့ဝန်ထမ်းကို မေးတယ်။ဘော့စ်။&nbsp; &nbsp;။ အလုပ်လေးတချို့လက်စသတ်ရအောင် မင်း ဒီ တနင်္ဂနွေ ရုံးလာနိုင်မလား။ဝန်ထမ်း။&nbsp; &nbsp;။ ဟုတ်ကဲ့ လာခဲ့ပါမယ် ဘော့စ်။ ဒါပေမဲ့ တနင်္ဂနွေက တကယ်ဆိုးပါတယ်။ ကားလမ်းတွေအရမ်းပိတ်တော့ နည်းနည်းတော့နောက်ကျမယ်ဘော့စ်။ဘော့စ်။&nbsp; &nbsp;။ အင်း ဒါတော့ဟုတ်တယ်။ အားလုံးဖြစ်နေတာဆိုတော့ ဖြစ်မှာပဲ။ ဒါနဲ့ ဘယ်အချိန်လောက်ရောက...
Visits : 2077
လုပ်ငန်းခွင်မှာ ဝန်ထမ်းတွေ စိတ်ရောကိုယ်ပါ လုပ်ဆောင်ချင်စိတ် (Commitment) တိုးလာအောင်
HR Strategy တွေထဲမှာ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ Performance တွေ မြင့်တက်လာအောင်လုပ်တဲ့ "High Performance Strategy" ၊ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်ကိုသွားတဲ့အခါ ဝန်ထမ်းအများစုအားတက်သရော ပါဝင်လာအောင်လုပ်တဲ့ "High Involvement Strategy" အပြင် ဝန်ထမ်းတွေ&nbsp;လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ ဘယ်သူမှမတွန်းရဘဲ စိတ်ရောကိုယ်ပါ&nbsp;လုပ်ဆောင်ချင်စိတ်တွေ မြင့်တက်လာအောင်လုပ်တဲ့ "Hig...
အန္တရာယ် ကင်းအောင် လူတိုင်းနေချင်ပါတယ်။ အန္တရာယ်ကင်းမှသာ မိမိရဲ့ ဆက်လျှောက်မယ့် လမ်းခရီးဟာ ချော မွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အောင်မြင်မှု ရပါလိမ့်မယ်။ လူတစ်ဦး တစ်ယောက်က သူ့ဘဝအောင်မြင်မှုရဖို့အတွက် ကြိုတင်တွက်ဆ ထားတဲ့အခက် အခဲတွေကိုတွေ့နိုင်သလို ကြိုတင် တွက်ဆမထားတဲ့၊ မထင်မှတ်ဘဲ ပေါ်လာ တတ်တဲ့ပြဿနာတွေ ကိုလည်း ကြုံရမှာပါ။ အဲဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ကာယကံရှင်အနေနဲ့ ခံနိုင...
၁။ အပေါစားအဝတ်အစားတွေဝယ်တာကို ရပ်တန့်လိုက်ပါ။လူငယ်ဘာသာသဘာ၀ ပြောင်းလဲနေတဲ့ဖက်ရှင်ရေစီးကြောင်းနဲ့အမီ သင်ဟာ ပေါ်ပင်ဖက်ရှင်တွေနောက်ကို&nbsp;လိုက်တဲ့လူငယ်တစ်ယောက် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ အသက် ၂၄ နှစ်ကျော်ပြီဆိုရင်တော့ ပေါ်ပင်တွေနောက်ကို&nbsp;မလိုက်တော့ပဲ ကိုယ်နဲ့အသင့်တော်ဆုံးအလိုက်ဖက်ဆုံးဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်း အများလေးစားခံရပြီး စတိုင်ကျ...
Visits : 2950
Visits : 3712
အလုပ်အင်တာဗျူးကို ထိခိုက်နိုင်တဲ့ အကျင့် ၂၁ မျိုး
အလုပ်အင်တာဗျူးတွေဟာ ကိုယ့်အနိမ့်ဆုံးအရည်အသွေးလေးတချို့ကို ပြသဖို့ အဓိကအခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကပိုကရို ဝတ်ဆင်မှု၊ ဒါမှမဟုတ် အကောင်းမမြင်မှုစတဲ့ အကျင့်တွေကို ဝန်ထမ်းငှားရမ်းရေးမန်နေဂျာတွေက ကောင်းကောင်းမြင်နိုင်ပါတယ်။ အလုပ်အင်တာဗျူးမှာ ရှောင်ရှားသင့်တဲ့ အကျင့်ဆိုး ၂၁ မျိုးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။၁။ အိမ်စာမလုပ်ခြင်းအလုပ်ရှင်တွေက လစ်လပ်ရာထူးနဲ့ ၎င်းတ...
Visits : 2371
67 - 72 of ( 138 ) records